Vaginitis (မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်း) - Page 16 of 21 - Hello Sayarwon
Dr.Nyan Linn မှ ရေးသားသည်။ 28/01/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Vaginitis (မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်း) ကဘာလဲ။
မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်းဆိုသည်မှာ မိန်းမကိုယ်သည်ရောင်ရမ်းနာကျင်၍ ယားယံကာ အရည်များဆင်းခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဖြစ်ရသော အကြောင်းအရင်းမှာ မိန်းကိုယ်အတွင်းရှိ ဘက်တီးရီးယား(သို့) အခြားသောပိုးများ မမျှတ၍ဖြစ်သည်။ သွေးဆုံးပြီးသောအခါအီစထရိုဂျင်ဟော်မုန်းပမာဏများသွေးထဲတွင် လျော့ကျလာခြင်းနှင့် အခြားသော အရေပြားရောဂါများသည် မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်သည်။
အဖြစ်အများဆုံးသော မိန်းမကိုယ်အားရောင်ရမ်းစေသည့် ပုံစံကွဲများမှာ ဘက်တီးရီးရဲ ဗဂျိုင်နိုးစစ်၊ရီးစ်ဟူသော မှိုရောဂါတစ်မျိုး နှင့် ထရိုင်ခိုမိုနီရေးစစ်တို့ဖြစ်သည်။ ဘက်တီးရီးရဲ ဗဂျိုင်နိုးစစ်မှာ မိန်းမကိုယ်အတွင်းရှိ ပုံမှန်တွေ့ရှိရသော ဘက်တီးရီးယားများနှင့် ရီးစ်ဟူသောမှိုရောဂါမှာ ကန်ဒီဒါ အယ်လ်ဘီကန်ကဲ့သို့သော
မှိုများ လွန်စွာပေါက်ပွားနေ၍ဖြစ်ပြီး ထရိုင်ခိုမိုနီးရေးစစ်မှာ လိင်ဆက်ဆံရာမှ ကူးစက်သည့် ကပ်ပါးကောင်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကုသမှုမှာ ဖြစ်ပွားသော မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်း၏ ပုံစံအမျိုးအစားပေါ်တွင်မူတည်သည်။
Vaginitis (မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အလွန်အဖြစ်များသော ရောဂါဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးအများစုသည် အမျိုးမျိုးသော မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းစေသည့် ရောဂါပုံစံကွဲများကို အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ်ခန့်ဘဝတစ်လျှောက်တွင် ကြုံဖူးကြသည်။ သို့သော် ထိုရောဂါများအား ဖြစ်နိုင်ချေများကိုလျှော့ချကာ ကာကွယ်နိုင်သည်။ ထပ်မံသိရှိလိုပါက ဆရာဝန်အား ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။
Vaginitis (မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အချို့သော အဖြစ်များသည့် လက္ခဏာရပ်များမှာ
မိန်းမကိုယ်မှ ထွက်သော အရည်များ၏ အရောင်၊အနံ့ (သို့) ပမာဏ ပြောင်းလဲခြင်း
မိန်းမကိုယ်သည် ယားယံနေခြင်း (သို့) သက်သောင့်သက်သာမဖြစ်ခြင်း
မိန်းမကိုယ်မှ သွေးမကြာခဏ အနည်းငယ်စီ ဆင်းနေခြင်း
အကယ်၍ သင့်တွင် အခြားမိန်းမများတွင်ပုံမှန်အတိုင်း ဖြစ်လေ့မရှိသော မိန်းမကိုယ်မှ အရည်များဆင်းလာပါက ထိုအရည်များ၏လက္ခဏာရပ်များက သင့်တွင်ဖြစ်ပွားနေသည့် မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်းရောဂါပုံစံကွဲများအား ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သည်။ဥပမာ-
အညိုရောင်(သို့) မီးခိုးနှင့်အဖြူစပ်ထားသည့် အရောင်ရှိသော အနံဆိုးသည့် အရည်များမိန်းမကိုယ်မှ ထွက်တတ်သည်။ အများအားဖြင့် ထိုအနံ့ဆိုးသည် ငါးညှီနံ့နှင့်တူသည်ဟု ဆိုကြပြီး လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းပိုမိုသိသာတတ်သည်။
အဓိကလက္ခဏာမှာ မိန်းမကိုယ်ယားယံခြင်းဖြစ်ပြီး မိန်းမကိုယ်မှ ထွက်သောအရည်များသည် ချိစ်ပြားများကဲ့သို့အဖြူရောင်ရှိပြီး ကပ်စည်းထူထဲနေတတ်သည်။
စိမ်းဝါရောင်ရှိသော အမြှုပ်ထသည့် အရည်များ မိန်းမကိုယ်မှ ဆင်းလာတတ်သည်။
စောစီးစွာစမ်းသပ်တွေ့ရှိ၍ ကုသနိုင်ခြင်းသည် ရောဂါပိုဆိုးလာခြင်းနှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေများဖြစ်ပွားခြင်းတို့ကိုကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာဝန်အားအမြန်ဆုံးပြသဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ကာကွယ်ပါ။
Vaginitis (မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
မိန်းမကိုယ်အတွင်းရှိ ပုံမှန်တွေ ့ရှိရသော ဘက်တီးရီးယားများ၏ပြောင်းလဲလာမှုနှင့်အခြားသောပိုးများ၏ အလွန်အမင်းပေါက်ပွားလာမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပွားသည်။ မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်းကို အများဆုံးဖြစ်ပွားစေသောအကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်။ လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့် ပတ်သတ်ဆက်နွှယ်နေသည်ဟု ယူဆရပြီး အထူးသဖြင့် လိင်ဆက်ဆံဖော်များခြင်း (သို့) လိင်ဆက်ဆံဖော်အသစ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမိခြင်းတို့မှ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည်။
သို့သော်လည်း လိင်ဆက်ဆံလေ့မရှိသော အမျိုးသမီးများတွင်လည်း ဖြစ်ပွားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
မှိုများသည် မိန်းမကိုယ်ထဲတွင် လွန်စွာပေါက်ပွားသောအခါ ဖြစ်ပွားသည်။ ကန်ဒီဒါအယ်လ်ဘီကန်ဟူသော မှိုတစ်မျိုးသည် ခန္ဓါကိုယ်၏ စိုစွတ်သောနေရာများ (ဥပမာ မိန်းမကိုယ်၊ပေါင်ခြံနှင့် ချိုင်းကဲ့သို့သော အရေပြားနှစ်ခုထိကပ်နေသောကြားများ၊ပါးစပ်နှင့် လက်သည်းခွံအောက်နေရာများတွင်ဖြစ်ပွားတတ်သည်။)
ရောဂါပိုးရှိသောသူနှင့် လိင်ဆက်ဆံရာမှကူးစက်သောရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ထရိုင်ခိုမိုးနပ်စ်ဗချိုင်နယ်လစ် ဟုခေါ်သည့် ကပ်ပါးပိုးတစ်မျိုးမှ ဖြစ်ပွားစေသည်။
မိန်းမကိုယ်အားဖြန်းပက်ရသောအရည်များ၊ထည့်သောပစ္စည်းများ၊လိမ်းသော အမွှေးဆပ်ပြာများနှင့်သုက်အားသေစေသည့် ဓါတုပစ ္စည်းများသည် မိန်းမကိုယ်အပေါက်ဝနှင့် နှုတ်ခမ်းသားများကို ဓါတ်မတည့်ခြင်း နှင့် ထိခိုက်ပျက်စီးရောင်ရမ်းစေခြင်းများဖြစ်ပွားစေတတ်သည်။ ချွတ်ကာစွန့်ပစ်ရန်မေ့နေသောအမျိုးသမီးလစဉ်သုံးပစ္စည်းများနှင့်အိမ်သာသုံးတစ်ရှူးများကဲ့သို့သော ပြင်ပမှ ပစ္စည်းများသည်လည်း မိန်းမကိုယ်အား တခါတရံတွင် ရောင်ရမ်းမှုရှိစေတတ်သည်။
Vaginitis (မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အောက်ပါ အကြောင်းအရာများနှင့်တွေ့ကြုံနေရပါကမိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်း၏ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်တက်စေပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်း၊ကိုယ်ဝန်တားဆေးသုံးနေခြင်း(သို့) သွေးဆုံးခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သော ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုများ
စတီးရွိုက်နှင့် ပိုးသတ်ဆေးများကဲ့သို့သော ဆေးဝါးများအသုံးပြုနေရခြင်း
သုက်ပိုးများအားသေစေနိုင်သော ဓါတုပစ္စည်းများအား မိန်းမကိုယ်ထဲတွင် သုတ်လိမ်းအသုံးပြုခြင်း
ရေစိမ်ရာတွင်အမြှုပ်ထစေသော ဆပ်ပြာရည်များ၊မိန်းမကိုယ်အားဖြန်းပက်ရသော အရည်များ၊(သို့) အနံ့အသက်ပျောက်ဆေးများ စသည့်တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းစေသော ပစ္စည်းများအား မိန်းမကိုယ်တွင် အသုံးပြုခြင်း
မိန်းမကိုယ်အား ရေ(သို့)အခြားအရည်များဖြင့် ဖြန်းပက်ဆေးကြောခြင်း
ကျပ်တည်းသော အဝတ်အစားများကို ဝတ်ဆင်ခြင်း
Vaginitis (မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
အကယ်၍ဆရာဝန်မှ မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းနေသည်ဟုသံသယရှိပါကမိန်းမကိုယ်အားစစ်ဆေးကြည့်ရှူထိတွေ စမ်းသပ်တတ်ပါသည်။ ထို့နောက် အောက်ပါစစ်ဆေးမှုတခုခုကို ပြုလုပ်ရန် ညွှန်ကြားတတ်ပါသည်။
မိန်းမကိုယ်ရှိအရည်တို့ကို နမူနာယူ၍ စမ်းသပ်ခြင်း
မည်သည့် မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းမှုရောဂါကွဲဖြစ်ပွားနေသည်ကို သေချာစွာသိရှိနိုင်ရန်ဆရာဝန်မှ မိန်းမကိုယ်(သို့) သားအိမ်ခေါင်းရှိအချွဲရည်တို့ကို နမူနာ ယူကာစစ်ဆေးရန်ညွှန်ကြားတတ်ပါသည်။
ပီအိတ်ရှ်စစ်နိုင်သော တုတ်ချောင်းငယ်(သို့) စာရွက်လေးအားမိန်းမကိုယ်နံရံတွင် ထိတွေ့စေခြင်းအားဖြင့် မိန်းမကိုယ်၏ပီအိတ်ရှ် (သို့) အက်စစ်နှင့် အယ်ကာလီမျှတမှုရှိမရှိကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ပီအိတ်ရှ်တက်နေပါက ဘက်တီးရီးရဲဗဂျိုင်နိုးစစ် (သို့) ထရိုင်ခိုမိုနီရေးစစ် တို့ရှိနေကြောင်းကို ဖော်ပြသည်။ သို့သော် ပီအိတ်ရှ်စစ်ဆေးခြင်းတခုတည်းသည် အတည်ပြုနိုင်သောစစ်ဆေးမှုမဟုတ်ပေ။
Vaginitis (မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်းအား စစ်ဆေးတွေ့ရှိပြီးပါက ဆရာဝန်သည် ဖြစ်ပွားသော အကြောင်းအရင်းပေါ်မူတည်၍ မတူညီသော ကုသမှုများကို ပြုလုပ်ပေးတတ်ပါသည်။
ဘက်တီးရီးရဲဗချိုင်နိုးစစ်ကြောင့် မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းပါက မက်ထရိုနီဒါဇိုး ဟူသော ဆေးအားသောက်သုံးရန်ညွှန်ကြားခြင်းခံရတတ်သည်။ ဆေးအားတည့်မတည့် စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ပြီးနောက် ထိုဆေးများအား သောက်သုံးရတတ်သည်။
ရီးစ်ဟူသောမှိုရောဂါတစ်မျိုးကို အလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်သော မီကိုနာဇော၊ကလိုထရီမဇော၊ဘူတိုကိုနာဇော (သို့) တီရိုကိုနာဇိုး စသည့် မှိုသတ် ဆေးမှုန့်များ (သို့)လိမ်းဆေးခရင်မ် များဖြင့် အများအားဖြင့်ကုသတတ်သည်။
ထရိုင်ခိုမိုနီရေးစစ်ရောဂါကိုကုသရန် မက်ထရိုနီဒါဇိုး(သို့) တင်နီဒါဇိုး ဆေးပြားများကို သောက်သုံးရတတ်သည်။
အဏုဇီဝပိုးငယ်များကြောင့်မဟုတ်သော မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်းအား ကုသနိုင်ရန် မိမိ၏ မိန်းမကိုယ်အား ထိခိုက်ရောင်ရမ်းနေစေသည့် ပစ္စည်းအား သိရှိရန်နှင့် ရှောင်ကြဉ်ရန်လိုအပ်သည်။ ရောင်ရမ်းစေနိုင်သည့် ပစ္စည်းအချို့မှာ အမျိုးသမီးလစဉ်သုံးပစ္စည်းများ၊ဆပ်ပြာအသစ်များ၊နှင့် အဝတ်လျှော်ရာတွင် သုံးသော အရောင်ချွတ်ဆေးများ စသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်း ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ရေစိမ်ခြင်း၊တစ်ကိုယ်လုံးအား အညောင်းအညာပြေစေရန် ရေနွေးကန်ထဲတွင် ရေနွေးစိမ်ခြင်းတို့ကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း
ဓါတ်မတည့်၍ရောင်ရမ်းစေနိုင်သည့်ပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း ဥပမာ အမွှေးဆပ်ပြာများ၊နှင့် အမွှေးနံ့ပါသည့်လစဉ်သုံးပစ္စည်းများ။
ရေချိုးရာတွင် ဆပ်ပြာတိုက်ပြီးပါက စင်ကြယ်အောင်ဆေးကြော၍ဆပ်ပြာနှင့်မိန်းမကိုယ်အရေပြားတို့အကြားဓါတ်မတည့်ခြင်းမဖြစ်ပေါ်စေရန်သေသေချာချာ ခြောက်အောင်သုတ်ပါ။ အနံ့အသက်ပျောက်စေသော၊အမြှုပ်ထသော၊ဘက်တီးရီးယားများအားသေစေနိုင်သော မာကြောကြမ်းတမ်း၍ ဓါတ်ပြုမှုအားပြင်းထန်သည့် ဆပ်ပြာများအသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
အိမ်သာတက်ပြီးတိုင်း ဆေးကြောပါက အရှေ့မှ အနောက်သို့သာ ဆေးကြောသုတ်သင်ခြင်းအားဖြင့် မစင်များနှင့် ပတ်သတ်ဆက်နွှယ်သော ဘက်တီးရီးယားပိုးများ မိန်းမကိုယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခြင်းကို တားဆီးကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
Vaginal Dryness: Causes and Moisturizing Treatments.
http://www.webmd.com/women/guide/vaginal-dryness-causes-moisturizing-treatments#1-2. Accessed November 8, 2017.
http://www.nhs.uk/Conditions/dry-vagina/Pages/Introduction.aspx#symptoms. Accessed November 8, 2017.
http://www.mayoclinic.org/symptoms/vaginal-dryness/basics/causes/sym-20151520. Accessed November 8, 2017.